Tsvaga maitiro ekuchengeta hutano hwepfungwa zuva nezuva | Bezzia
Maitiro ekuchengeta hutano hwepfungwa pane zvezuva nezuva
Susana Garcia | 02/05/2021 18:00 | Yakagadziridzwa ku 28/04/2021 09:49 | Psychology, Psychology uye vaviri
La hutano hwepfungwa ipfungwa yakakura kwazvo Iwe haugone kuvharwa muchinhu chimwe chete asi anenge munhu wese achaziva kana iwe wagwinya uye kana usiri. Kuchengetedza hutano hwedu hwepfungwa kwakakosha sekuchengeta muviri wedu, nekuti ese ari maviri akasunganidzwa, haugone kuva neumwe usina mumwe. Saka isu tichaenda kunoona mamwe matipi ekudzidza maitiro ekuchengetedza hutano hwepfungwa zuva nezuva.
Wedu tsika uye hupenyu hwedu hwezuva nezuva zvinokanganisa zvikuru mawaniro atinozviita isu mupfungwa. Hutano hwepfungwa hunofanirwa kutarisirwa zuva rega rega kuitira kuti tiwane mwero watinonzwa kufara. Ndosaka paine zvinhu zvakawanda zvinogona kutibatsira kuti tive nehutano uye kuti tive nepfungwa dzakasimba uye dzine hutano.
1 Chikafu chine utano
2 Chengetedza muviri wako
3 Chengetedza shamwari dzako
4 Nguva yekuzorora
5 Ita chimwe chinhu chaunofarira zuva rega rega
6 Kurongeka uye kurudziro
Chikafu chine utano
Kudya zvine hutano ndeimwe yemakiyi makuru atinofanira kunakidzwa nepfungwa dzakanaka. Kunyangwe zvingave zvisingaite senge, hutano hwemuviri hunokanganisa pfungwa dzedu zvakanyanya uye zvinopesana. Ndokusaka tichifanira kuzvitarisira isu mukati nekunze. Zvakakosha kwazvo idya zvakanaka kuti unzwe kugadzikana uye kutarisira muviri munguva refu. Kudya kwacho kunofanirwa kuve kwakaringana, nemhando dzese dzezvikafu, tichidzivirira mafuta akazara uye neshuga zvinogona kukuvadza hutano hwedu. Kana tikadya zvakanaka tinozove nehukama hwakanaka nechikafu uye tichadzivirira kuve nekufuta uye matambudziko ese ehutano anogona kuunzwa nekudya kwakashata. Idya michero nemiriwo zuva nezuva uye unwe mvura yakawanda uye iwe uchaona kugara zvakanaka mumuviri wako nenzira yechisikigo.
Chengetedza muviri wako
Kuchengeta muviri chimwe chikamu chakakosha. Chikafu chakakosha zvakanyanya, asi zvakare uchiita mitambo kuti ugare uchikurumidza, mudiki uye uine hutano. Iyo mutambo unosimbisa mhasuru nemapfupa, kunonoka kukwegura uye kubatsira kufamba kwedu. Haingotibatsire panyama chete, asi inobatsirawo kukudziridza pfungwa nekuiita kuti inzwe zvirinani, nekuti kuita mitambo kunotibatsira kuburitsa endorphins nemamwe mahormone anovandudza system yedu yese, kusanganisira immune system.
Chengetedza shamwari dzako
Kuva neshamwari chikamu chakakosha chekuva nepfungwa dzakanaka. Shamwari ndiyo mhuri yaunosarudza uye kana iwo akanaka isu tichagara tine rutsigiro mavari. Asi hushamwari haufanire kutorwa sehushe, hunofanirwa kuchengetwawo. Gara neanopa chero chinhu kwauri uye neavo vakakosha kwauri. Kunyangwe iwe uri kana usiri munhu anofambidzana, zvakakosha kuti uve nehukama hwakanaka.
Mazuva ano tinotarisa zvakanyanya pane ese mabasa atinofanira kuita tisinga funge nguva yekuzorora. Pane dzimwe nguva tinokanganwa iva nenguva yekusununguka mazuva ese kwedu pachedu, kuzorora kana kuita zvatinoda. Saka izvo zvinofanirwa kuve zvinoera. Mazuva ese anofanira kuzorora nekuti kana tikasazvitarisira isu hatikwanise kutarisira vamwe vanhu kana kupora maererano nehutano hwepfungwa.
Ita chimwe chinhu chaunofarira zuva rega rega
Tinofanira kuita chimwe chinhu chatinoda zuva nezuva. Ichi chikamu chakanyatsodikanwa nekuti zvido zvekuvaraidza uye zororo zvinoita kuti kushushikana kuitike uye tinzwe zvirinani. Kana maawa achikurumidza kukurumidza kuita chimwe chinhu, ndizvozvo zvirokwazvo unoifarira uye urikunakidzwa nayo. Ndokusaka iwe uchifanira kuita chimwe chinhu chakadai zuva nezuva.
Kurongeka uye kurudziro
Zvakakosha kuti hupenyu hwedu ndihwo zvakare yakarongeka uye kuti isu tine zvibodzwa uye zvinokurudzira. Zviri nyore kuti tinzwe kugadzikana uye tinzwe kugara zvakanaka kana tiine hupenyu hwakarongeka, nekuti nenzira iyi tinogona zvakare kuita kuti izere yenguva yedu ive iri nani. Kune rimwe divi, zvakafanira kuve nezvikurudziro, sezvo zvichitibatsira kusimuka mazuva ese uye kuve nesimba rekuzadzisa zvinangwa zvedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Maitiro ekuchengeta hutano hwepfungwa pane zvezuva nezuva
Masitaira ebvudzi akanaka
Savory zucchini uye mbudzi cheese tart